Kazakhstan: Resaka fitantanam-pitondrana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Novambra 2010 10:16 GMT
Tsy mitsahatra ny miady hevitra amin'ny lohahavitra tiany indrindra ny mpitoraka bilaogy Kazakh – ny kalitaon'ny fitondram-bahoaka. Mametram-panontaniana mikasika ny fahaiza-manaon'ireo mpitondra ambony i Megakhuimyak ary miteny fa matetika dia tsy mbola manan-danja noho ny “raharaham-pianakaviana” izany. Mbola olana goavana eo amin'ny fitsinjarana ny zavatra ilain'ny mponina Kazakhstani ny fisian'ny finamanana (fahalalàna olona) na eo amin'ny sehatry ny asa izany na amin'ny asam-bahoaka. Nasehon'ny mpitoraka bilaogy iray ohatra ny an'ny minisitry ny paositra sy ny fifandraisandavitra amin'izao fotoana – nanao fanambarana ity olona vao notendrena teo amin'ny fitondrana ity, izay toa hafahafa ny zavatra lazainy eny na eo imason'ireo tsy matihanina aza [ru]:
Manontany tena aho hoe fahamendrehana tahaka ny inona no azony no nahalasa azy ho minisitra. Nojereko ary ny boky milazalaza ny momba azy ary hitako fa i Ainura Mami [zanak'ilay mpampanoa lalàna any Kazakhstan] ny vadiny. Araka izany, afaka hanantena zava-baovao mikasika ny fifandraisan-davitra ve isika?
Tulembaeva – Mpanabe any amin'ny anjerimanontolo sy mpanolo-kevitra – mitoraka bilaogy mikasika ny fahaiza-manataneraka ireo tetikasam-pandrosoana haroson'ny Governemanta [ru]:
Ny hany azontsika hatao dia ny mamorona anaran-kevi-dravina ho an'ireo tetikasan'ny Governemanta – tahaka “Ny tetikasan'ny Fitondrana amin'ny fampandrosana ny ara-indostrialy-sy- ny teknolojia vaovao”… Nefa rehefa tonga amin'ny fanatanterahana azy, dia manjavona ny volavolan-kevitra. Satria ny fiarovan-javatra sy ireo teny maniry fiovana dia tsy maintsy , miaraka amin'ny hetsika sahaza azy avy, izay tsy tafapetraka noho ireo antony maro – ankoatra ny fanjavonan'ny vola entina hanaovana ny asa. Raha mihena ny sehatry ny fikarohana sy ny fandrosoana, dia tsy azo sainina ny resaka mikasika ny fivoarana sy ny fiakaran'ny harin-karena.
Mihevitra i Isabekov fa ireo vahoaka mpiasa-tena ihany no hiantefan'ity krizy ara-bola ity any Kazakhstan – tahaka ireo izay mampiodina orinasa madinika na antonony – ary tsy dia misy fiantraikany loatra any amin'ireo mpiasam-panjakana (na miasa any amin'ny orinasam-panjakana izy ireo na tonga dia any amin'ny Fanjakana fotsiny) [ru]:
Nijery ireo olona ao anatin'ny namako aho, ireo izay miasa any amin'ireo orinasam-panjakana na any amin'ireo asam-bahoaka – ary miaritra tsara an'ity krizy ity. Nanontany azy ireo aho, hoe mana-danja sy ilaina tahaka ny inona – araka ny heviny – ireo sehatra hiasany. Raha toa ka mbola tsy tena hafahafa amiko ireo olona nataoko fanadihadihana, dia nahazo valiny tsotra aho. Niteny ahy izy ireo fa ny sehatra hiasany dia na tena tsy misy ilana azy mihitsy, na afaka ahena 70-80 isan-jatony ireo mpiasa.
Manohy ny resaka mikasika ny tsy fananan'ny olona saina hanangana orinasa sy ny lanjany eo amin'ny fiadiana amin'ny fahantrana ny Thinking the world [ru]:
Mamonjy makany an-tanàn-dehibe, toerana ahafahany mikarama, ny mponina any amin'ny faritra ambanivohitra. Tsy te-hiasa mitokana izy, na tsy mahafantatra ny fanaovana izany. Na koa mbola tsy nieritreritra safidy tahaka izany izy, satria efa zatra mahazo karama […]
Na dia 10 isan-jato fotsiny aza ny mponina any ambanivohitra sy ireo tanàna kely no afaka manangana ny asany manokana ka hanakaramany lehilahy na vehivay eo amin'ny 4 na 5 eo, dia hidina ny endrika mampiseho ny lesoka eo amin'ireo fizaran-tany. Mety ho tsara ho an'ny firenena izany, kanefa, indrisy, tsy manana vahoaka maro tahaka izany isika, izay manana ireo zavatra ilaina mba hampiodinana orinasa. Ho fanampin'izay, tsy ampy fepetra sy fahazotoana tsara hoentina hitantanana izany isika.
Izany no mahatonga an'ireo mponina maro mpandraharaha eto amintsika – tahaka ireo hafa rehetra ihany koa – matetika misafidy fa mbola ahazoana tombony bebe kokoa ny ho mpikarama tsotra. Ireo izany no antony ahitantsika fifantohan'ny mponina mafy indrindra any amin'ireo tanàna 4-5 manerana ny firenena.